Abwaan gabay ka tiriyay tahriibka - BBC News Somali
Abwaan gabay ka tiriyay tahriibka
19 Maajo 2016
Hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa baahisay tusmo muujineysa qaabka ay dalalka caalamka usoo dhaweeyaan qaxootiga.
Waxaa kaalinta koowaad galay dalalka Shiinaha, Jarmalka iyo UK, halka Ruushkana uu ugu hooseeyo.
Baaritaanka ay hay'adda sameysay ayaa lagu wareystay 27 kun oo qof oo ku kala nool 27 dal, kuwaasoo la waydiiyay in ay ogolyihiin in qaxooti ay ku martigeliyaan dalkooda, magaalada ay ku dhasheen ama guryahooda.
Haddaba Soomaali badan ayaa ka mid ah qaxootiga caalamiga ah ee hareeyay siyaasadaha dalal badan.
Dhalinyarada ayaa u badan dadkaasi dalalka kale qaxootiga ku ah, waxaana badankood ay sheegaan in saboolnimo ka carar ay ku kalifto in ay waddamada qalaad u tahriibaan.
Sadiiq Ismaaciil Hiiliye, waa abwaan da'yar oo ku nool dalka Sacuudi Carabiya, waxaana uu gabayo dhowr ah ka tiriyay tahriibka, asagoo sheegaya in haddii Soomaalidu ay dhulkooda u dadaalaan ay gaarsiin karaan horumar la mid ah Yurub iyo Mareykanka.
Abwaan Hiiliye ayaa Suheyba Maxamed Badqas u warramay.
Maqal Biyo la'aan baahsan oo ka jirta qeybo ka mid ah gobolka Bari
Biyo la'aan baahsan oo ka jirta qeybo ka mid ah gobolka Bari
Maqal Askari Soomaali ah oo ka tirsanaa booliska Mareykanka oo loo xiray dil ka dhacay Minneapolis
Askari Soomaali ah oo ka tirsanaa booliska Mareykanka oo loo xiray dil ka dhacay Minneapolis
Maqal Maamulada gobolka Gedo iyo Mandheera oo ka wada hadlay darbiga laga dhisayo xadka
Maamulada gobolka Gedo iyo Mandheera oo ka wada hadlay darbiga laga dhisayo xadka
Maqal Qaxooti badan oo ka soo qaxay Itoobiya oo soo gaaray dalka Kenya.
Qaxooti badan oo ka soo qaxay Itoobiya oo soo gaaray dalka Kenya.
Maqal Faysal Cabdullaahi oo ah 16 jir ayaa diiday xil loo magacaabay
Faysal Cabdullaahi oo ah 16 jir ayaa diiday xil loo magacaabay
Maqal Cawaaqibka ka dhalan kara is qabqabsiga u dhaxeeya madaxda dowladda
Cawaaqibka ka dhalan kara is qabqabsiga u dhaxeeya madaxda dowladda